Ciyaaraha – Page 2 – Wanleweyn – Hoyga Wararka Tayeysan – Wararka Soomaaliya
September 1, 2016	Leave a comment 83 Views
Francesco Totti ayaa shaaca ka qaaday in AC Milan ay isku dayday saxiixiisa markuu 13 jir ahaa balse hooyadiis ay diiday dhaqaaqaas. laacibka kubada cagta Talyaaniga wuxuu u wareegsan lahaa San Siro markuu yaraa, hase yeeshee inuu halkaas u wareego waxaa ka hor yimid hooyadiis Fiorella hadana wuxuu fasal ciyaareedkii 25aad la qaadanayaa kooxdii yaraantiisa. Halyeyga reer Roma kaas oo ...
Rasmi: Laacibka reer Germany Mustafi oo ugu dambeyn ku biiray Arsenal
Baadigoobkii ay Arsenal ugu jirtay inay hesho bedelka mudada dheer ee Per Mertesacker ayaa ugu danbeysay soo dhamaaday. Sida uu sheegay wariyaha Sky Sports Germany Marc Behrenbeck, 24 jirkaan ayaa u saxiixay kooxda Emirates Stadium ka dhisan heshiis shan sannadood ah, waxaana heshiiskiisa lagu dhawaaqayaa maalinta talaadada. Sababta waxa uu ku sheegay inay weli harsan tahay waraqooyin la saxiixayo islamarkaana ...
Warbixin: Eric Bailly oo u qalma lacagtii laga soo bixiyay, Rooney oo u baahan Kursiga Keydka & waxyaabihii laga bartay guushii United…
August 28, 2016	Leave a comment 58 Views
Manchester United ayaa waqtigii dhimashada ciyaarta guul ka gaartay kooxda Hull City waana guushii seddexaad ee seddex kulan oo la ciyaaray xilli ciyaareedka horyaalka Premier League, Marcus Rashford oo bedel ku soo galay ayaana United u dhaliyay goolka guusha. Jariirada Daily Mirror ayaa qortay afar waxyaabood oo laga bartay kulankii caawa ay Manchester United ka badisay kooxda Hull City oo ...
Jose Mourinho oo ka hadlay isku Aadkii Europa Leaque-ga
August 27, 2016	Leave a comment 24 Views
Tababaraha kooxda Manchester United ee Jose Mourinho ayaa soo dhaweeyay groupka kooxdiisa Man United ay ku dhacday ee heerka Groupyada Europa Leaque-ga inkasta oo uu ku sheegay in uu yahay group aad u adag. Mourinho ayaa ku doodya in groupkani uu fiican yahay sababtoo ah waxa ay u fikir karaan sidii uu Champions Leaque-ga yahay oo kale. Man United ...
DEG DEG: Cristiano Ronaldo oo ku guulaystay abaal marinta laacibka ugu fiican yurub
August 25, 2016	Leave a comment 69 Views
Xiriirka kubadda cagta yurub ee UEFA ayaa gudoonsiiyay Cristiano Ronaldo abaal marinta laacibka ugu fiican yurub ee 2016. Cristiano Ronaldo ayaa abaal marintaan ka dul qaaday ciyaartoyda kala ah Gareth Bale iy Griezmann kuwaas oo kula loolamayay sanadkaan. Kabtanka xulka qaranka Portugal ayaa u gacangaliyay kooxdiisa Real Madrid koobka horyaalada yurub isaga oo sidoo kale koobka qaramada qaarada yurub kula ...
Warbixin: Sababta ay Ciidamada Danab ay u joogaan Gaalkacyo oo la ogaaday
August 24, 2016	Leave a comment 44 Views
Shabakada Wanleweyn ayaa heshay sababta ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Danab howlgalada la dagaalanka Al-shabaab uga sameynayan magaalada Galakacyo. Ciidamadaan oo labadii asbuuc ee la soo dhaafey howlgalo lagu qab-qabanayo Al-Shabaab ka wadey magalaada Galkacayo dhinaceeda Woqooyi iyo Koonfureed ayaa wararka aan heleyno xusayaan iney hordhac u yihiin howlo amaanka loogu sugayo Madaxeynaha Xasan Shiikh oo ku wajahan ...
FC Porto oo Champions Leaque-ga ka reebtay Roma iyo natiijooyinkii kale….
Shan kooxdood oo ka mid ahaa toban kooxood oo caawa ciyaaray kulamadii lugta danbe ee isreeb reebka Champions Leaque-ga ayaa u soo baxay heerka Groupyada Champions Leaque-ga halka shan kooxood ay ku fashilmeen in ay ka soo gudbaan wareegii saddexaad ee isreeb reebkii Champions Leaque-ga ee loogu soo baxay heerka Groupyada UEFA Champions Leaque-ga. Kooxda AS Roma ayaa ka mid ...
Real Madrid oo guul weyn gaartay kulankii ugu horeeyey ee Horyaalka Spain..
August 22, 2016	Leave a comment 54 Views
Real Madrid ayaa xili ciyaareedka cusub ee La Liga guul ku furtay iyada oo 3:0 ku soo garaacday kooxda Real Sociedad oo ay marti u ahayd. Waxaana Real Madrid guushan u horseeday Gareth Bale oo laba gool dhaliyay iyo da’yarka Marco Asensio oo gool qurux badan dhaliyay waxayna Madrid soo gaadhay guul muhiim ah oo ay ku soo heshay saddex ...
Neymar JR oo xulka Qarankiisa Brazil ku Hogaamiyay Brazil xilli ay garaacday Germany
Xulka qaranka Brazil ayaa ugu danbayn ku guulaystay bilada dahabka ah ciyaaraha kubbada cagta Olimbikada aduunka kadib markii ay Germany ku garaaceen rekoodhayaal 5:4 ah, waxaana Germany rekoodhihiisa ka qasaariyay Petersen iyada oo goolhayaha Brazil uu Germany ka hor joogsaday in ay darbadii shanaad gool u badalaan waxaana rekoodhaha guusha isku soo taagay isla markaana guusha ugu horseeday Brazil kabtankooda Neymar JR ...
Ibrahimovic oo guul ku hogaamiyey Man United xilli ay guul ku gaaray Old Traffrod
August 20, 2016	Leave a comment 43 Views
Manchester United ayaa guusheedii ugu horaysay ee Premier Leaque-ga ee xili ciyaareedka cusub ku gaadhay garoonkeeda Old Traffrod kadib markii ay 2:0 ku garaacday kooxda Southampton. Waxaana guusha Man United ku hogaamiyay Zlatan Ibrahimovic oo labada goolba udhaliyay kooxdiisa Red Devils. Manchester United ayaa soo gabagabasyay saddex kulan oo xidhiidh ah oo ayna Saints guul kaga gaadhay Old Traffrod waxayna ...